नेकपाको आमहडताल: कलंकी बाट नेता शाक्य र बागबजारबाट नेता मल्ल र भण्डारी पक्राउ! - muktikhabar
मुक्तिखबर	काठमाण्डाैं	माघ २२, २०७७
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । पक्राउ पर्न साथ नेता भण्डारीले सडकमा हिड्न नपाउने केपितन्त्र मुर्दावाद! भनेर सामाजिक संन्जालमा लेखेका हुन् ।
बागबजारबाट नेकपा नेता रमेश मल्ल र अनेरास्ववियू केन्द्रिय विद्यार्थी नेता तिलक राज भण्डारी र सपिम खरेल पक्राउ परेका छन् । अहिले उनीहरूलाई महाराजगञ्ज प्रहरी तालिम केन्द्र केन्द्र मा राखिएको छ। त्यस्तै कलंकीबाट अष्ट लक्ष्मी शाक्य पक्राउ परेकी हुन् । आज आमहड्ताल गरेको समूहका आधा दर्जन नेता- कार्यकर्तासहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
हड्ताल सफल बनाउन नेता-कार्यकर्ताहरु सडकमा आएकाबेला पक्राउ परेका हुन् ।
प्रहरीले बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यका विभिन्न स्थानबाट हड्ताल गर्न निस्किएका कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छ । बिहान सामाखसुसीबाट पनि केही युवा पक्राउ परेका छन् ।
२२ माघ २०७७, बिहीवार ०८:०८ बजे प्रकाशित
संवैधानिक नियुक्तिका सात त्रुटि